Manazava ny tena zava-dehibe tokony hoeritreretinao ny fitadiavana ny anaran'anarana
Rehefa mieritreritra ny hametraka fanatrehany an-tserasera ianao, ny zavatra voalohany tokony hataonaoAtaovy ny fanoratana ny sehatr'asa. Ny fisafidianana ny anaran'ny sehatra dia zava-dehibe satria izy iona hahatonga anao hahomby na tsy hahomby amin'ny fisainanao. Ny anaran'ny sehatra dia manome toky ny aterinetofanatrehana, ahafahana mahita ny tranokalanao. Mitady ny anaran'ilay sehatra tsara, Nanoro hevitra anao i Julia Vashneva, manam-pahaizana momba ny sehatra nomena alalana nomerika ho an'ny Digital Services - security company portland.
Zava-dehibe ny fitadiavana orinasa azo antoka. Matetika ny sasany amin'ireo orinasa ireo dia manomboka mamolavola azy ireony fanampiana tafahoatra, ary taty aoriana dia lasa mahamenatra ny fiaraha-miasa amin'izy ireo. Etsy ankilany,Ireo orinasa hafa dia mitaky avo lenta nefa tsy manome tolotra kalitao. Manaova fanamarinana matihaninaamin'ny orinasa tianao hiasanao miaraka amin'ny fomba hahafantaranao ny marina momba izany.
Rehefa eo amin'ny dingan'ny fisoratana anarana ny anaranao ianao, mifidy ny anaranaMety ho sarotra indraindray. Ny tokony hoeritreretinao dia ny tokony hisy ny anaranaMahaiza mahatsiaro ary mifandray akaiky amin'ny asa izay misy ny tranonkalatsy maintsy manao. Ankoatra izany, tokony ho anarana iray ihany koa ny teny izay mora jerena.
Copyright an'ny anarana nomena anarana
Ataovy azo antoka fa ny anaran'ilay sehatra nofidinao dia tsy voarakotry ny olon-kafa toy izanydia mety hitondra zava-manahirana ara-dalàna aminao. Tsara ho azo antoka fa ny orinasa, izay ianaonisafidy ny fisoratana anarana momba ny sehatra, dia nanazava mazava tsara ny mpampiasa ny mpampiasa ny anaran-toeranamanome. Ataovy ny safidy mety amin'ny extension amin'ny fampiasana izany amin'ny anaranao anaran-toerana, ohatra,Mety ho ny .com .net.org sy ny maro hafa, miankina amin'ny tanjon'ny tranonkala.
Mifidy ny tenimiafina
Safidy ny teny fanalahidy manan-danja dia lafiny manan-danja tokony ho raisina rehefa misafidyny anaran-toerana. Ny milina fikarohana dia toa manintona anarana manan-danja iray manan-danja. Amin'ity tranga ity, ianaoTokony hanandrana sy hampiasa ny teny fototra na fehezanteny tianao hanatsarana ny tranokalanao ianaoary mamandrika ary manamboatra azy io amin'ny anaran'ny sehatra.
Tokony hiezaka koa ianao tsy hanana ny anaran'ny anaranao anarana amin'ny alàlan'ny tranonkala. satriaRehefa manapa-kevitra ny hanaraka ny fomba miaraka amin'ny mpampiantrano anao ianao (izay mahazatra), dia lasa aretin'andoha izanyny sehatra misy anao, raha izany, dia ho tsara raha mizara azy ianao.